अन्डर एसएलसी नेताहरु हटाउन जरुरी छ ! – Rastriyapatrika
अन्डर एसएलसी नेताहरु हटाउन जरुरी छ !
नेपाल एक यस्तो देश हो जहाँ अन्डर एसएलसी मान्छे नेता भएर पिएचडी गरेको कर्मचारीलाइ आफ्नो अन्डरमा राख्छन्। हाम्रो देशमा नेता हुन कुनै पढाई चाइदैन र कानुनमा पनि नेता हुन कुनै पढाई तोकिएको छैन। यो हाम्रो कानुनको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो।
बिश्वमा बिकासित देशहरुमा प्रधानमन्त्री हुन सर्बप्रथम उचित पढाई हुनपर्छ। हरेक बिकासित देशहरुमा हेर्नुस, त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा ब्याच्लर पास गरेक नै हुन्छन। कतिपय बिकासित देशहरुमा त मास्टर्स नै पास गरेका हुन्छन। तर हाम्रो देशले बर्सौ देखि एसएलसी पास नगरेका प्रधानमन्त्री पाइरहेका छौं।
यहाँ बरु ड्राइभर हुन १० कक्षा पास हुनपर्ने नियम बनेको छ तर नेता हुन कुनै पढाई तोकिएको छैन।
सरकारी पाले हुनलाइ ८ कक्षा पास गर्नै पर्छ तर नेता बन्न त्यति नि चाइदैन। किन राजनैतिक उच्च पदमा पुग्न शैक्षिक योग्यता नचाइएको नेपालमा ?
यदि राष्ट्र हाक्ने नेताकै शिक्षा छैन भने त्यो देशमा के बिकास होला ? जनताले कस्तो बिकासको आशा गर्ने ? के क्षमता हुन्छ त्यस्तो नेतामा ?
बास्तबमा मूर्ख त जनता पनि हुन । अलि बुझेर अनि योग्य नेतालाइ ठाँउमा पुराउन कहिलै नि खोज्दैनन्। आफ्नो भोटको महत्व नबुझेपछी यस्तै हो ।
त्यसैले देश बिकास गर्न सबैभन्दा पहिला देशमा यो कानुन बन्न पर्छ कि नेता बन्न पनि शैक्षिक योग्यता हुनपर्छ। कम्तिमा ब्याच्लर पास भएको मान्छे मात्र पार्टीमा केन्दृय सदस्य हुन पाउने वातावरण हरेक राजनैतिक पार्टीले गर्न पर्छ।
देशलाइ सम्वृद्धि तर्फ धकेल्न सबैभन्दा आबश्यक पुर्बाधार भनेको योग्य नेता हो ।
८ कक्षा फेल भएर हुलाक बन्न लायक मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ने हैन पढेलेखेको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ ।